Maraykanka oo sheegay inuu ku wareeray QABIILKA Somalia & qorshe uu u dejiyey!! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maraykanka oo sheegay inuu ku wareeray QABIILKA Somalia & qorshe uu u...
Maraykanka oo sheegay inuu ku wareeray QABIILKA Somalia & qorshe uu u dejiyey!!
(Muqdisho) 30 Abriil 2020 – Danjiraha Maraykanka u fadhiya Somalia, Donald Yamamoto, ayaa waraysi dheer oo uu siiyey hay’adda cilmi baarista ku sameeysa arrimaha argagixisada ee Combating Terrorism Center ayaa ka hadlaya arrimo badan.
CTC ayaa Danjiraha waydiisey sida uu u arko dhinaca ay caalamku ku wareersan yihiin oo ah qabiilka iyo sida ay ugu dhaqanto Soomaalidu iyo sida ay Maraykanku uga guulaysan karaan cilladaasi?
Yamamoto: [Dhibka ugu badan siyaasadda qabiilku] waa inaadan qofna qabiilkiisa garan karin marka aad eegto, ilaa ay iyagu ka hadlaan qabiilkooda, waa wax adag in la ogaado.
Waa caqabad jirta, maxaa yeelay waa qaab la isku taageero, balse si looga gudbo ku tiirsanaanta qabiilka oo loo dhiso qaran xooggan oo horusocod samayn kara, waa in uu dhacaa isbeddel jiileed. In ka badan 70% Soomaalidu waxay ka yar yihiin 30-jir, waxayna doonayaan isbeddel ay hor taagan tahay ku tiirsanaanta qabiilku.
Waxa uu Maraykanku doonaya waa inuu ka caawiyo waa in la taageero waxbarashada, waayo iyada ayaa dadka xoreeysa. Haddii ay 65% dadku ummi yihiin, qabiilku isagaa ayaa dalka haysanaya, balse si isbeddelkaasi u dhoco waa in la helaa isbedel dhaqan iyo mid jiileed kaasoo waqti badan qaadanaya, ha yeeshee si isbeddel siyaasadeed oo nabdoon loo helo waa in ay dadku helaan xorriyad ay ku doortaan qofkii ay doonayaan halkii ay u dooran lahaayeen oday dhaqameed, ayuu kusoo afjaray jawaabtiisa.
Previous articleJilaagii 2-aad oo Hindi ah oo saacado dabadood u dhintay isla cudurkii….
Next articleDF Somalia oo marin habaabin ku wadda kadeedka Covid-19 (Kas & kama’ kee ayay ka tahay?)